Qaxootiga Roomiga ee Koosovo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tobias Billström, wasiirka socdaalka. Jan Eliasson, agaasimaha guud ee wasaaradda socdaalka.
Qaxootiga Roomiga ee Koosovo
Publicerat torsdag 18 februari 2010 kl 15.28
Billström oo cirka u laalay shuruud ay soo jeedisay heeyadda-talada ee ururka Midowga Yurub.
Wasiirka socdaalka Tobias Billström ayaa jawaab cad ka bixiyey war ey idaacadda iswiidhen laanteeda wararka ee Ekot ku bayaanisay xaaladda cakiran ee qaxootiga qoowmiyadda Roomiga ee ka soo baqoola carriga Koosavo, islamarkaana uu dalkani dib ugu celiyo, kadib go’aanka dalabka qaxootigaa marka diidmada la siiyo.
Ma jirto cid ey ka dahsoon tahay xaaladda cakiran ee qaxootiga qoowmiyadda Roomiga ee ka soo baqoola Koosovo, oo ka mid ah waddammada dhaca bariga Yurub. Balse iima muuqato sida sharci ahaan wax looga badali lahaa sidii gacan taageero ah loogu fidin lahaa dadyoowgaa, iyo in cid walba in cid walba xaaladeeda si gaar ah loo eego, sida uu sheegay wasiirku.
- Maha mid aan wax ka qaban karno wixii ka dambeeyey 2006-dii oo dib u habeeyn lagu sameeyey habkii maamulka ee xeerka socdaalka, lana aasaasay maxkamadda socdaalka. Ma dooneeyno in aan jawaab guud oo diidmo ah bixino. Mana doonayo inaan dib ugu noqono xeerarkii jirey wixii waagaa ka horreeyay.
Nidaamka aan doonayo, dawladda dalkuna dooneeyso wuxuu yahey in ruux walba dalabkiisa si gaar ah loo eego. Waana xeer ka wanaagsan kii midkan ka horreeyey. Sidaasi waxaa sheegey wasiirka socdaalka ee dalka Iswiidhen Tobias Billström.
Sida lagu sheegey war ey soo saartay heeyadda qaxootiga ee Qaramada Midoowday ee UNHCR in Iswiidhen ey dib ugu celiso badankood qaxootiga qoowmiyadda Roomiga dalka Koosavo. Thomas Hammarberg, ahna sarkaal ka hoowlgala heeyadda talada ee ururka Eu-da, ayaa ku sharuudeeyey dalka Iswiidhen in uu joojiyo gebi ahaan in dib loogu celiyo qaxootiga Roomiga ee ka soo baqoola dalka Koosavo. Mar uu middaa uga warramayey Ekot-na wuxuu sheegey:
- Waxaa la oran karaa in falka qaxootiga Roomiga dib loogu celiyo Koosovo uu yahey fadeexad. Waana mid laga yaqyaqsoodo, iyo in falkaasina uu dhaco iyada oo ay carrigaa ku sugan yihiin ciidammo iyo shaqaale ka hoowlgala ee ka socda bulshada caalamka caalamka.
Veli Brijani, waa suxufi ka hoowlgala idaacadda iswiidhen laanteeda Roomiga, lafahaantiisna ka soo jeeda qoowmiyadda Roomiga ee Koosovo.
- Dhibaatada illaa hadda aan weli la xalin waxey tahey xuquuqda dadyoowga laga tirada badan yahey. Qaar badan ee ka mid ah 250-ka kun ee qoowmiyadda Roomiga kana soo jeeda carriga Koosovo waxey ku sugan yihiin xeryo aaney suurtagal u aheeyn iney ka baxaan oo bulshada ku dhax milmaan ama la noolaadan.
Qoowmiyadda Roomiga ayaa sida uu Veli noo sheegay waxey ku nool yihiin xaalad qaxooti eyna ugu baqoolaan qaar badan ee ka mid ah qaxootinimo qeybo ka baxsan Koosovo ee carrigii horey loo oran jirey Yugoslaafiya. Qaarkood waxay u soo baqooleen waddamada dhaca galbeedka Yurub oo uu dalkan Iswiidhanna ka mid yahey. Veli ayaan haddaba weeydiiney, waxaa ugu wacan in heyadda socdaalak ee dalkan Iswiidhen dib ugu celiso qaxootiga Roomiga dalka curdanka ah ee Koosovo, haddii aaney ku heeysan ixtiraam xuquuqda bani’aadamka, iyadoona islamarkaa ay qoowmiyaddaha caalamku la socdaan xaqiiqda dalkaa ka jirta.
- Waa digniintii labaad ee heyadda talada ee EU-du siiso waddammo ey ka mid yihiin Iswiidhen, Jarmalka iyo Iswiiserland, in aaney dib ugu celin qaxootiga qoowmiyadda Roomiga dalka Koosovo. Maadama aaney ka heleeyn nolol wanaagsan ee ku dhisan sinnaan iyo cadaalad.